Maitiro ekumisikidza iyo Siri Remote | IPhone nhau
Maitiro ekumisikidza iyo Siri Remote
Iyo nyowani yechina-chizvarwa Apple TV yekudzivirira pfundo inounza zvimwe maficha kupfuura ayo akaitangira. Iyo trackpad yekufamba kuburikidza nemamenyu kana kusarudza sarudzo, kugona kudzora vhoriyamu uye simba reterevhizheni yako, maikorofoni yeSiri, nezvimwe. Isu tinoongorora muvhidhiyo ndedzipi sarudzo dzekumisikidza dzinopihwa neSiri Remote nyowani uye nemabatiro atingaitezve uye nekuibatanidza zvakare neApple TV.
Iyo Siri Remote control haingotitenderi isu kuti tifambe kuburikidza nemamenyu eiyo nyowani Apple TV, asi zvakare iri inodzora controller yemavhidhiyo mitambo. Yayo gyroscope uye accelerometer yakanakira kutyaira mitambo kana mitambo yemitambo yakadai seBeat Sports, sezvo ichinyatsoteedzera mashandiro eNintendo Wii controller. Yayo trackpad inoshandiswa zvakare kudzora mimwe mitambo, pamusoro pekufambisa mamenu, typing uchishandisa iyo-skrini keyboard nezvimwe. Kuisa iyo trackpad senitivity kunobatsira kwazvo kana iwe uchifunga kuti iko kwekufambisa kunokasira kana kunonoka. tvOS inotibvumidza kusarudza pakati pematanho matatu ekunzwa, iyo yepakati sarudzo iri iyo inosarudzwa nekutadza.
Kukwanisa kuwedzera matsva ekudzora masimba iri zvakare mukana unozotibvumidza isu kutamba yakawanda yemitambo iyo inobvumidza vatambi vakawanda nevanhu vanoverengeka. Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti iyo yekudzivirira kureti inogadziriswazve kuitira kana ikashanda zvisirizvo kana isu tinongoda kuwedzera imwe nyowani kure yatakatenga, kana kuishandisa pane imwe Apple TV pane yakajairwa iyo. Chekupedzisira isu zvakare tinotaura nezve mashandiro eSiri Remote kudzora vhoriyamu uye iyo uye nekudzima kweterevhizheni yako, kugona kusiya kure kwayo kune rumwe rutivi uye kutonga zvese neApple TV kure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekumisikidza iyo Siri Remote
Iyo Siri Remote inogona kubatanidzwa kune iyo iPhone 6 yekushandisa neIOS Keynote?
Ndatenda kwazvo Luis
PDF Nyanzvi 5, gadzirisa maPDF nekushandisa kwevhiki
WeatherBoard yakagadziridzwa kune yechipiri vhezheni yeIOS 9 nePad [Vhidhiyo]